संघीय संसद बैठक तीन दिनका लागि स्थगित, कांग्रेसको अवरोध जारी – BRTNepal
संघीय संसद बैठक तीन दिनका लागि स्थगित, कांग्रेसको अवरोध जारी
बिआरटीनेपाल २०७५ माघ ८ गते ८:२३ मा प्रकाशित
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण संघीय संसदको बैठक तीन दिनका लागि स्थगित गरिएको छ । डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमतिअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ पारित गर्नुपर्ने माग गर्दै मंगलबार पनि कांगे्रसले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । अवरोधका बीच संसद बैठक सूचना टाँस गरी माघ ११ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको हो ।
संसद्मा चिकित्सा शिक्षा बिधेयक पेश गर्न वेलमा पुगेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई रोक्न खोज्दा कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरुबीच धकेलाधकेल भएको थियो । मन्त्री पोखरेल नेकपाका सांसद देव गुरुङ र खगराज अधिकारीसँगै रोष्ट्रमतर्फ अघि बढेपछि कांग्रेस सांसदहरु आक्रोशित भएका थिए । संसद अवरोध गरेपछि सत्तारुढ नेकपाका नेताहरू भने आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरूले कांग्रेसले नै उक्साएर डा. केसीलाई अनशन बस्न लगाएको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । संसद अवरोध र मर्यादाविपरीत काम गरेकाले कांग्रेसले नै डा. केसीलाई अनशन बस्न लगाएको भन्ने प्रमाणित भएको नेकपा सांसद खगराज अधिकारी बताउनुभयो । मंगलबारको प्रतिनिधिसभालाई कांग्रेस सांसदहरूले अवरोध गरेपछि पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सभामुखले पेल्न खोजेको भन्दै सभामुखको विरुद्धमा लाग्ने बताउनुभयो । मंगलबार संसदमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ पारित गर्ने एकमात्रै कार्यसूची रहेता पनि कांग्रेसका सांसदको अवरोधका कारण उक्त विधेयकउपर संसदमा छलफल हुन सकेन । कांग्रेसले डा. केसीसँग भएका पूर्वसहमतिअनुसार नै विधेयक पारित गर्ने पर्ने अडान लिँदै आएको छ भने सरकारले डा केसीसँग भएका ९५ प्रतिशत सहमति विधेयकमा समावेश भएको जनाउँदै आएको छ । त्यस्तै कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा खोल्न लागिएका अस्पताललाई खारेज गर्न खोजेको भन्दै सदन र सार्वजनिक ठाउँबाट आक्रोश व्यक्त गर्दै आएको छ ।